Ungalitshintsha njani igama le-WiFi kunye negama lokugqitha | Iindaba zeGajethi
Ungalitshintsha njani igama le-WiFi kunye negama lokugqitha
Okokuqala yayilunxibelelwano lwe-intanethi emakhaya. Emva koko kweza i-broadband, i-ADSL, kunye ne-fiber optics. Kwaye ngomzuzu ongagqitywanga phakathi kwazo zonke ezidlulileyo, i-WiFi yeza ezindlwini zethu. Kwaye ngayo, ngesandla bekuze nokwenzeka ukuba nawuphi na umntu wasemzini onokuthi, esazi isitshixo, aqhagamshele kwinethiwekhi yethu kwaye akhangele kwisibindi sayo ngaphandle konxibelelwano ngokwasemzimbeni.
Owona mqobo uphambili okhoyo phakathi komngeneleli kunye nenethiwekhi yethu ligama lokugqitha lenethiwekhi yeWiFi. Ngaphandle kwayo, awukwazi ukufikelela kwi-router kwaye, enyanisweni, inyathelo lokuqala xa sifuna ukudibanisa kwisixhobo esitsha kukufaka eli qhosha. Kodwa ngaba kuphela kwesithintelo esikhoyo? Sijoyine kwaye funda ukutshintsha iphasiwedi, Kwaye ukunqanda abangeneleli kwinethiwekhi yakho.
1 Ukuqonda inethiwekhi yethu
2 Into yokuqala: fikelela kwi-router
3 Kuthekani ukuba ayisebenzi nge-192.168.1.1?
Ukuqonda inethiwekhi yethu
Ukucaca malunga nendlela inethiwekhi yethu yeWiFi esebenza ngayo, kufuneka kuqala sazi isikimu sayo. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba ne-router, ebonelelwe yinkampani yethu ye-intanethi, kwaye loo mzila yi ukuhambisa umqondiso, zombini ngentambo nangaphandle kwentambo, kuzo zonke izixhobo.
Kodwa kuyakubakho iimeko apho, phakathi kwendlela kunye nezixhobo zethu (iifowuni eziphathwayo, iitafile, iikhompyuter, njl ...) masibe nezinye izixhobo ezisebenza njengebhulorho, nokuba kukwandisa umqondiso wenethiwekhi yethu okanye ukunqanda ukuphulukana nesantya kuyo. Kutshanje sikuxelele ngokuchanekileyo indlela yokukhulisa umqondiso wenethiwekhi yakho yeWiFi kwaye wandise uluhlu lwayo ngothotho lwezixhobo ezinje ngeziphindayo, ekuya kufuneka sizithathele ingqalelo.
Into yokuqala: fikelela kwi-router
Inyathelo lokuqala ukuphucula ukhuseleko kwenethiwekhi yethu kunye nokutshintsha ipaswedi ukubathintela ekufikeleleni kulwazi lwethu kukufikelela kwi-router. Kodwa hayi, oko akuthethi ukuba ukhuphe i-screwdriver kwaye uyivule ukuze ungene ngaphakathi. Ilula kakhulu kunale.
Njengaso nasiphi na isixhobo esixhumeke kwinethiwekhi, nokuba yikhompyuter, ithebhulethi, iselfowuni okanye nayiphi na igajethi, umzila unedilesi yawo ngaphakathi kuyo. Ewe, kufuneka siyifumane idilesi yokufikelela kuyo. Njengomgaqo jikelele umzila yinto yokuqala kwinethiwekhiOko kukuthi, into apho ezinye izixhobo ezixhumeka kwinethiwekhi zixhoma khona, nokuba yeyifowuni ephathekayo, ithebhulethi, ikhompyuter, njl. Kungenxa yoko Idilesi yomzila iya kuba, kuma-99% amatyala, 192.168.1.1.
Kuya kufuneka singene kule dilesi kwisikhangeli esikukhethayo, nokuba yiChannel, Opera, Safari, Firefox, njl., Kwaye ucofe iqhosha lokungena, ngokungathi sifikelela nakweyiphi na iwebhusayithi. Nje ukuba iphepha lilayishwe, siya kuyifumana loo nto Isicela igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukufikelela kulungelelwaniso yalo Ezi datha zokufikelela zingafumaneka emazantsi ayo, kunye negama eligqithisiweyo lenethiwekhi yeWiFi uqobo.
Nje ukuba singene kwimenyu yoqwalaselo lomqhubi, sinokwahluka inani elikhulu leeparamitha ngokuthanda yalo Kuxhomekeka kulwakhiwo kunye nemodeli, siya kuba nenkululeko engaphezulu okanye encinci xa sisenza utshintsho, nangona ivela kwi-Blusens Sincoma ukuchukumisa ubuncinci beeparameter kwaye sinamathele kwabo siyaziyo ukuba bakhuselekile, njengoko sinokulungisa ngendlela engafanelekanga umzila okanye uqhagamshelo kwi-intanethi uqobo, kwaye sifune utyelelo kwinkampani yethu yobuchwephesha ukuyibuyisela.
Njengoko ubona kumfanekiso ongentla, kwimeko yam, nge-Movistar ADSL router, Sijonge intsimi ngegama lokungena le-WiFi. Le yona kuya kufuneka siyitshintshe, nangona silumkile, kufuneka siqwalasele ukuba, emva kokutshintsha, Zonke izixhobo zethu eziqhagamshelwe yiWiFi ziya kunqunyulwa ngokuzenzekelayo, kwaye kuya kufuneka siphinde sigqibe iphasiwedi ukuze sonwabe kunxibelelwano.
Nathi sinako ukwenjenjalo, ngeli xesha, tshintsha igama lenethiwekhi yethu yeWiFi, eya kuthi iboniswe kuzo zonke izixhobo ezifuna ukunxibelelana nayo ukufikelela kwi-intanethi. Kufuneka siguqule nje amasimi kwaye ucofe ulungile.
Kodwa masihambe inyathelo elingaphezulu. Uyakhumbula ukuba kukho igama eligqithisiweyo lokufikelela kulungelelwaniso? Kulungile ukuba siyafuna ukuphucula ukhuseleko yenethiwekhi yethu nangakumbi, Akukhathazi ukutshintsha kwakhona iphasiwedi ukufikelela kuqwalaselo. Khumbula ukuba zonke izithintelo zimbalwa ukusithintela ukuba sibe uqhagamshelo okanye idatha egcinwe kwiikhompyuter okanye kwizixhobo zethu.
Kwisikrini esinye sokumisela, kwimeko yethu, Sinokhetho lokukhetha Tshintsha iphasiwedi. Ngokucofa kwiqhosha esinokulibona kumfanekiso ongentla, ukuwa phantsi kuya kuvula apho Kuya kufuneka sichaze iphasiwedi endala, kwaye siphinda kabini iphasiwedi entsha ukuba sifuna ukuseka ukufikelela kumzila.
Khumbula ukuba, kuxhomekeke kwimodeli yomzila, amanyathelo ahlukaEwe, mhlawumbi kukho ukhetho lokuba kufuneka sikhangele ngakumbi phakathi kweemenyu kwaye asinamaqhosha asondele kakhulu ukwenza olu tshintsho. Kufuneka nje ukuhamba phakathi kweemenyu ezahlukeneyo, kwaye ujonge enye ebhekisa kukhuseleko lwenethiwekhi yeWiFi yokutshintsha igama kunye negama lokugqitha, okanye kwidatha yokufikelela ukutshintsha iphasiwedi.
Kuthekani ukuba ayisebenzi nge-192.168.1.1?
Kungenzeka ukuba, kwiimeko zofakelo olunzima ngakumbi, nezinto ezingakumbi phakathi, okanye i-router esifuna ukufikelela kuyo ayisiyo eyenkampani, Idilesi ye-IP yomzila ayisiyongagqibekanga. Kule meko, kuya kufuneka sifumanise. Sukuba nexhala, kuba yi Inkqubo elula ngokwenene, kwaye linani elithile kuphela eliya kwahluka, kuba iya kuhlala igcina ischema "192.168.xx".
Ukuba inkqubo yethu yokusebenza Windows, kuya kufuneka ukufikelela ngokukhawuleza komyaleloOko kukuthi, cinezela ukuqala kunye nohlobo CMD. Iwindows yomnyama eqhelekileyo iya kuvula, kwaye Ukubhala ipconfig kwaye ucinezela ukungena, izakusibonisa zonke iinkcukacha zonxibelelwano lwethu.
Nje ukuba sibe nazo zonke iinkcukacha zayo, kuya kufuneka sijonge isango elingagqibekanga. Idilesi ephawula ngasekunene yile kufuneka siyisebenzise ukufikelela umzila. Ukuba usebenzisa IMac, Eli nyathelo lilula kakhulu. Kufuneka nje bamba phantsi iqhosha yonke into kwikhibhodi yethu, ngaxeshanye sicofa kwimenyu yoqhagamshelo lweWiFi, kwibar ephezulu.
Ixabiso ekufuneka silithathele ingqalelo kukwakha, Oko kukuthi, idilesi yomzila. Oku kwimeko nganye iya kwahluka, nangona ihlala ilandela ipateni "192.168.xx". Nje ukuba siyazi ukuba yeyiphi idilesi ye-router yethu, lixesha lokuba uyifumane. Ngenxa yoko kufuneka ngenisa isikhangeli sewebhu, kwaye ubhale le dilesi kuyo, ucinezela ukungena ukufikelela. Onke amanye amanyathelo asuka apha aya kufana ncam njengoko ubonile ngaphambili.
Ngala manyathelo alula, uya kufumana ukuphucula kakhulu ukhuseleko kwenethiwekhi yakho yeWiFi, kwaye ngaphezu kwako konke ukugcina idatha ikhuselekile. Kodwa nangona uya kuwanciphisa amathuba okungena kwabangeneleli kuyoKhumbula ukuba ukuba usenokrokrela, ungasilandela esi sikhokelo sincinci kwaye uqiniseke ngokujonga ukuba ngaba umntu uyeba na i-WiFi yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ungalitshintsha njani igama le-WiFi kunye negama lokugqitha
Esona saphulelo kwiKoogeek kunye nedodocool kwiAmazon